Umpu wokuphulula umzimba - Zeziphi iingenelo onazo kumzimba wethu | Bezzia
USusana godoy | 10/01/2022 10:00 | Ubuhle
I-massage gun ibe yenye yezona zixhobo zisetyenziswa kakhulu kumaxesha okugqibela. Kuyinyani ukuba ngaphambili kuphela iimbaleki ezinkulu ezinokuthi zixhamle kuyo kodwa ngoku kubonakala ngathi yonke into itshintshile kwaye ngamaxabiso aphantsi ngokwenene, sinokuba nayo enye endlwini yethu kwaye sizuze kuzo zonke iingenelo zayo, ezingembalwa.
Ngaba uyazazi zonke iingenelo zayo? Kuba kukho intetho yoncedo phelisa iintlungu zemisipha. Kodwa kuyinyani ukuba isenazo ezinye izibonelelo ezininzi ofanele wazi ngazo. Ngale ndlela uya kwazi ukuba iya kuba ngumhlobo wakho omtsha ukunika umzimba wakho lula kwaye ukwandise ukusebenza. Kodwa masihambe inyathelo ngenyathelo ukuze ungaphoswa kwanto.
1 Ngokuphawulekayo kunciphisa ukukhathala kwemisipha
2 Iphucula ukujikeleza
3 Uncedo lwezifo ezingapheliyo
4 Ukuphelisa iikhontrakthi
5 Ukuphucula ukuhamba komzimba
6 Ukuphumla ngakumbi ebomini bakho
Ngokuphawulekayo kunciphisa ukukhathala kwemisipha
Enye yeenzuzo ezinkulu ze-massage gun kukuba kunye nayo uya kuthi ndlela-ntle kukudinwa kwemisipha. Xa kukho ukukhathala kwemisipha okanye ukukhathala kwefayibha, siya kuthi kwakhona kukho uqeqesho olunzulu emva kwayo. Yiyo loo nto iintlungu zinokubonakala kuwo wonke umzimba kwaye umpu uyazi kakuhle indlela yokuwususa. Njengoko uyidlula, uya kuphawula indlela loo mvakalelo eya kunyamalala ngayo ngokukhawuleza ngakumbi kuba ithanda ukuchacha.
Njengoko ikukuphulula, siyazi ukuba siya kuba naye ukuvuselela kunye nokuphucula ukujikeleza. Yintoni eyenza umzimba wonke ube neoksijini njengoko ufanelekile. Ngoko ke, akuyimfuneko ukusebenzisa amandla, kodwa ngentloko efanelekileyo kuphela, unokuhamba ngemilenze kwaye ukhohlwe ngokukhathala kubo, ngenxa yolu phuculo lokujikeleza. Ngaba asiyonzuzo enkulu leyo?
Uncedo lwezifo ezingapheliyo
Isiseko salo esiphambili ngamandla okuvalelisa kwiintlungu. Ke ngoko, akukho nto ifana nokuyisebenzisa xa kukho kwakhona izifo ezingapheliyo ezifana nesifo samathambo. Kuye, intlungu kunye nokuqina zezinye zeempawu eziqhelekileyo. Ke ngoko, ukuze banciphise, akukho nto ifana ne-massage ethambileyo ngokukhawuleza nangendlela esebenzayo njengaleyo inikezelwe ngumpu wokuphulula.
Akunjalo kuphela i-muscle ehlabayo evela ekuzivocavoca ekujoliswe kuyo kolu nyango. Kodwa ukongeza, iikhontrakthi zikwangomyalelo wosuku. Ngenxa yokuchitha ixesha elininzi sihleli okanye ngenxa yesantya sobomi esisikhokelayo, kuqhelekile ukuba namaqhina kwindawo yamagxa, umlomo wesibeleko okanye nakwindawo yelumbar.. Ke, kubo bonke, ukungcangcazela okukhutshwe ngulo mpu lolona nyango lungcono. Yithi ndlela ntle kuxinzelelo lwemisipha.
Ukuphucula ukuhamba komzimba
Nangona mhlawumbi kwezinye iindawo asikunyamezeli kakuhle ukuphulula umzimba, kuyinyaniso ukuba xa sithetha ngokubanzi, umpu yenye yezona ngcamango zilungileyo zokuphulula umzimba. ukuphucula ukuhamba komzimba wonke. Ukususela ngokunciphisa zonke iingxabano, siya kuqaphela indlela esinokuhamba ngayo ngakumbi kuba ikhawuleza ukuxutywa kwazo zonke izondlo zokuphucula izicubu. Oku kubangela ukuchacha ngokukhawuleza okukhulu.
Ukuphumla ngakumbi ebomini bakho
Ukuba besikhe sakhankanya iikhontrakthi ngaphambili, kuyacaca ukuba kufuneka siqhubeke sithetha ngayo yonke into ebavelisayo kwaye omnye wemiba ecacileyo luxinzelelo. Kungoko enkosi kwiimasaji, isingqisho sazo kunye noxinzelelo olukhoyo siya kuqaphela indlela umzimba okhululeka ngayo kwaye ukuphumla kuya kungena ebomini bethu. Ngokuqinisekileyo, ngokuvalelisa kuyo yonke le nto, siya kuba namandla ngakumbi kunye namandla angaphezulu, ngoko ngompu we-massage sinokuziva sibulela kwiintloko ezahlukeneyo ezijoliswe kumaqela ahlukeneyo emisipha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Zonke iingenelo ze-massage gun
Ukuthengiswa kukaJanuwari, basebenzise ngokuqaphela!